I-DA ithi kumnyama kubomvu iyaqhubeka imashi yaseThekwini | News24
I-DA ithi kumnyama kubomvu iyaqhubeka imashi yaseThekwini
Durban - Iqembu iDemocratic Alliance esifundazweni iKwaZulu-Natal lithumele incwadi evela kubameli balo liyibhekise kuMeya weTheku, uZandile Gumede.
Le ncwadi inika uGumede umnqamulajuqu wangoLwesihlanu ekuseni ukuze ahoxise amazwi akhe anokusabisa futhi angahambisani noMthethosisekelo mayelana nemashi ehlelwe yile nhlangano njengengxenye yamamashi azoqhubeka kuleli amelene noMengameli Jacob Zuma.
UGumede uthembise ukuthi kuzoboshwa wonke umuntu ozobamba iqhaza kula mamashi nokuyinto iDA eyithatha njengokucindezelwa kwelungela layo lokumasha ngokuthula.
UZwakele Mngcwango ongumholi we-DA esifundazweni uthe babone kungcono ukuba baye enkantolo ngemuva kokuba imeya isabise abantu ngokuthi bazoboshwa uma bebamba iqhaza kule mashi.
“Sicele ukuba inkantolo ingenelele ngoba kuyacaca ukuthi uGumede usabisa abantu futhi inkulumo yakhe ihlongoza udlame. Inkantolo isivunile isicelo sethu sokuba avale umlomo wakhe uGumede angabe esayithi vu indaba yale mashi futhi uyena ozokhokhela izindleko zenkantolo,” kusho uMncwango.
UMncwango uqhubeke wathi inkantolo isigunyazile isicelo sabo sokuba nemashi ngoLwesihlanu kanti namaphoyisa azobe ekhona ukuqapha isimo.
“Le mashi icelwe amalungu omphakathi azwakalise ukukhathazeka ngesimo esibhekene naso siyizwe futhi afuna ukubonisa ukuthi aweneme nezwe ngoMengameli wezwe. Sicele imvume yenkantolo ukuze sibe nemashi enokuthula ngoba akukho okubi esikuhlosile futhi asilufuni udlame,” kuqhubeka yena.
Okhulumela ihhovisi leMeya, uMthunzi Gumede, uthi ayikho le nto eshiwo yi-DA yokuthi amagama eMeya ahlongoza udlame.
Kuzoba namamashi amathathu edolobheni eThekwini ngoLwesihlanu, kunemashi ehlelwe abe-Save SA, kubekhona eyophiko lwentsha kaKhongolose kulesi sifundazwe kanti futhi kunenye imashi ehlelwe abasebenzi basemakhazeni.
"Into ecelwa wuMkhandlu weTheku wukuthula nokungaphazamiseki kokusebenza kukamasipala, kanye nokwabantu abadayisa emgwaqeni."
UGumede ubuye wanxusa bonke abazobamba iqhaza kula mamashi ukuba bahloniphe amaphoyisa futhi bahambisane nemiyalelo yawo ukuze kugwemeke udlame.
IDA eKZN ithole incwadi yenkantolo exwayisa iMeya yeTheku ukuba ihoxise amagama ayo aziswana ngabazobamba iqhaza kwimashi @IzindabaNews24 pic.twitter.com/lv3AG7LlBS
— NkoolieNhlapo (@NduNhlapo) April 6, 2017